တရုတ်ဇာတ်လမ်းတွဲကြိုက်သူတွေ ကြည့်သင့်တဲ့ 2020ထွက် ဇာတ်လမ်းတွဲသစ်များ | News Bar Myanmar
တရုတ်ဇာတ်လမ်းတွဲကြိုက်သူတွေ ကြည့်သင့်တဲ့ 2020ထွက် ဇာတ်လမ်းတွဲသစ်များ
၂၀၂၀ မှာလည်း များပြားလှတဲ့ တရုတ်ဇာတ်လမ်းတွဲကောင်းတွေ ထွက်ရှိနေပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့တွေကတော့ အခုဖော်ပြပေးမယ့် ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်လေးတွေကို ကြည့်ပြီးကောင်းဖြစ်ချင်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မကြည့်ရသေးတဲ့ သူတွေအတွက်တော့ အခုညွှန်းပေးမဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်လေးတွေကို ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
တရုတ်သိုင်းကားတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ သူတွေအဖို့ကတော့ Under The Power ဟာကြည့်သင့်ကြည့်ထိုက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုပါ။ မင်ခေတ်ကို အခြေခံရိုက်ကူးထားပြီး ဘုရင်အစောင့်အရှောက်တပ်မတော်၏ အကြီးအကဲ Lu Yi နှင့် Ji Xia ဆိုတဲ့ စုံစမ်းရေးစုံထောက်ကောင်မလေးတို့ကို အဓိကဇာတ်အိမ်တည်ပြီး ရိုက်ကူးထားတာပါ။
နိုင်ငံအတွင်း အကျင့်ပျက်ချစားမှုတွေ၊ မသမာမှုတွေကို အတူတူစုံစမ်းကြရင်း ပြသနာတွေကို ဖြေရှင်းကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စတွေ့ခါစတုန်းက အကျင့်စရိုက်လည်းမတူ၊ အားလုံဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတတ်တဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်း အချိန်ကြာလာတာနှင့်အမျှ သံယောဇဉ်တွယ်လာကြပြီး နောက်ဆုံးမှာတော့ ချစ်ကျွမ်းဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ မထင်မှတ်ပဲ Lu Yi ရဲ့မိသားစုဟာ Ji Xia တို့မိသားစုတွေ အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့ နောက်ကွယ်မှ တရားခံဆိုတာကို သိလိုက်ရပါတယ်။ Ji Xia တစ်ယောက်အချစ်ကိုရွေးချယ်မလား၊ လက်စားချေမှုကို ရွေးသွားမလားဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာပဲ ကြည့်လိုက်ပါနော်။
2. Skate Into Love
အားကစား drama အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး Zhang Xin Cheng နှင့် Wu Qian တို့မှ အဓိကသရုပ်ဆောင်အဖြစ် ပါဝင်ထားပါတယ်။ ကျောင်းရဲ့နာမည်ကျော် ဟော်ကီအားကစားသမားလေး Li Yu Bing (Zhang Xin Cheng) နှင့် Tang Xue ဆိုတဲ့ကျောင်းသူလေးတို့ကြားက အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကို လူငယ်အကြိုက်လေး ရိုက်ကူးထားပါတယ်။
Li Yu Bing နှင့် Tang Xue ဟာငယ်စဉ်တုန်းက အတန်းဖော်သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ထိုအချိန်က Tang Xue ဟာ Li Yu Bing အပေါ်မှာအမြဲတမ်းနှိပ်စက် အနိုင်ကျင့်လေ့ ရှိပါတယ်။ အရွယ်ရောက်လို့ ပြန်ဆုံကြတဲ့အခါကျတော့ Li Yu Bing တစ်ယောက်က Tang Xue သူ့အပေါ်ငယ်စဉ်တုန်းက အနိုင်ကျင်ခဲ့မှုတွေအတွက် ကလဲ့စားချေဖို့ ကြိုးစားပါတော့တယ်။
Tang Xue ကိုသူ့ရဲ့ လက်ထောက်ဖြစ်စေခဲ့ပြီး အနီးကပ်ပြန်ပြီး နှိပ်စက််ဆိုတဲ့ အကြံကြီးနဲ့ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အချစ်ဆိုတာဟာ ဖြစ်ပေါ်လာစမြဲပါ။ ဒီနှစ်ယောက် နောက်ပိုင်းမှာ ဘယ်လိုတွေချစ်သူဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုတော့ သိချင်ရင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲ ကြည့်လိုက်ကြပါနော်။
3.The Romance Of Tiger and Rose
သင်ဟာတကယ်လို့ ရီမောစရာဇာတ်လမ်းတွဲမျိုးကို ရှာဖွေနေတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲက ကွက်တိပါပဲ။ ရှေ့ခေတ်ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုကို ရေးသားနေတဲ့ တက်သစ်စာရေးဆရာမလေး Chen Xiao Qian ဟာ ကိုယ်ရေးထားတဲ့ ဝထ္ထုထဲကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ပြန်ရောက်သွားခဲ့တယ်။
Chen Qian Qian ဆိုတဲ့ မင်းသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကို ရခဲ့ပြီး အဆိုပါဇာတ်ကောင်ဟာ သူမရေးသားထားတဲ့ထ္ထုထဲမှာ အပိုင်း၃လောက်မှာပင် သေဆုံးပေးရမည့် ဖြတ်လျှောက်သာသာ ကာရိုက်တာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် Chen Xiao Qian တစ်ယောက် အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်ဖို့၊ အသက်ရှင်ဖို့၊ သူမရေးထားတဲ့ဝထ္ထုကို သူမကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစားပါတော့တယ်။
အဲ့လိုကြိုးစားရင်းနဲ့ သူမဟာဝထ္ထုရဲ့ အဓိကဇာတ်ကောင် ဖြစ်လာခဲ့ပြီး မင်းသား Han Shuo နှင့် ဝန်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Pei Heng တို့နှစ်ယောက်တို့နှင့်အတူ သုံးယောက်ပြိုင် အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းလေးဟာ ဇာတ်အိမ်လေးကလည်း ဆန်းပြီး၊ရီမောစရာတွေလည်း ပါဝင်တာမို့ ပရိတ်သတ်တွေကို အပန်းဖြေစေနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
4.Mr. Fox and Miss Rose
နောက်ထပ်ညွှန်းပေးချင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းကတော့ Ren You Lun နှင့် Zhang Ya Qing တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ခေတ်သစ်အချစ်ဇာတ်လမ်းလေး Mr.Fox and Miss Rose ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Gao Zhen He ဆိုတဲ့အဖိုးတန်ကျောက်တွေကို လိုက်လံရှာဖွေတဲ့ ကောင်လေးဟာ ကျောက်ရှာဖွေရင်း မမျှော်လင့်ဘဲတောင်ကမ်းပါး တစ်ခုကနေပြုတ်ချခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ Xing Yue ဆိုတဲ့ လူမျိုးစုခေါင်းဆောင် မိန်းကလေးက သူ့ကိုကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ Xing Yue တို့လူမျိုးစုဆီမှာက အရမ်းတန်ဖိုးကြီးတဲ့ ကျောက်တုံးတစ်တုံး ပိုင်ဆိုင်ထားတာကို Gao Zhen He တစ်ယောက်သိလိုက်ရတယ်။ ဒါ့ကြောင့်မို့ သူက Xing Yue နဲ့လက်ထပ်ဖို့ကို ကျောက်တုံးကိုလိုချင်တဲ့ အကြံကြောင့်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။ ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ သူတို့နှစ်ဦးကြားမှာ ပြသာနာတွေဖြစ်ခဲ့ပြီး ဘာလိုတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ ပိတ်ကားပေါ်မှာပဲ ကြည့်လိုက်ကြပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ပရိတ်သတ်ကြီးကို ညွှန်းပေးချင်တဲ့ ဇာတ်ကားလေးတွေကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ။ မကြည့်ရသေးရင်တော့ စမ်းကြည့်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ အားလပ်ရက်တွေမှာ ပရိတ်သတ်ကြီးအပန်းဖြေလို့ရမယ့် ဇာတ်လမ်းတွဲကောင်းလေးတွေ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်း မျှော်လင့်မိပါတယ်။
Next BoA ရဲ့ အနုပညာသက်တမ်း ၂၀ ပြည့်အတွက် ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြတဲ့ SM အနုပညာရှင်များ »
Previous « ရုပ်ရည်ချောမောလွန်းလို့ အေဂျင်စီက Casting ခေါ်ယူခဲ့ရတဲ့ Idol များ